Mentholatum Deep Heat Rub (မန်သိုလာတမ် ဒဏ်ကြေလိမ်းဆေးအပူ) - Hello Sayarwon
Mentholatum Deep Heat Rub (မန်သိုလာတမ် ဒဏ်ကြေလိမ်းဆေးအပူ)
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Mentholatum Deep Heat Rub (မန်သိုလာတမ် ဒဏ်ကြေလိမ်းဆေးအပူ)
Mentholatum Deep Heat Rub (မန်သိုလာတမ် ဒဏ်ကြေလိမ်းဆေးအပူ) ကဘာလဲ။
Generic Name: Mentholatum Deep Heat Rub (မန်သိုလာတမ် ဒဏ်ကြေလိမ်းဆေးအပူ) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Mentholatum Deep Heat Rub (မန်သိုလာတမ် ဒဏ်ကြေလိမ်းဆေးအပူ) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Mentholatum deep heat rub ကို နောက်ကျောနာခြင်း၊ လေးဖက်နာကြောင့်နာခြင်း၊ Sciatica, fibrosis, လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းကြောင့် ဒဏ်ဖြစ်ခြင်းတို့အပါအဝင် ကြွက်သားနာခြင်း၊ တောင့်ခြင်းများအတွက် အများဆုံးအသုံးပြုပါသည်။
Mentholatum Deep Heat Rub (မန်သိုလာတမ် ဒဏ်ကြေလိမ်းဆေးအပူ) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
Mentholatum deep heat rub ကို ဆရာဝန်ညွှန်သည့် ပမာဏ၊ အချိန်အတိုင်း အရေပြားကိုလိမ်းပါ။
Mentholatum deep heat rub ကိုမသုံးခင် အညွှန်းစာကိုသေချာဖတ်ပါ။
ဆရာဝန်ညွှန်သည့်အတိုင်း တိကျသည့်ဆေးပမာဏကိုချိန်ရန် ချိန်တွယ်သည့်ခွက်ကိုသုံးပါ။
အညွှန်းစာတွင် နားမလည်သည်များရှိပါက ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်ပါသည်။
Mentholatum Deep Heat Rub (မန်သိုလာတမ် ဒဏ်ကြေလိမ်းဆေးအပူ) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Mentholatum deep heat rub ကို တိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နှင့် စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားခြင်းက အကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းနည်းပင် ဖြစ်သည်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်ခြင်းနှင့် ဆေးအနေအထား ပျက်ယွင်းမှုများ မဖြစ်စေရန် Mentholatum deep heat rub ကို ရေချိုးခန်းတွင်သိမ်းဆည်းခြင်းနှင့် ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းခြင်းမျိုးမပြုလုပ်ပါနှင့်။ Mentholatum deep heat rub ဆေးအမျိုးအစားနှင့် ဆေးထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီ ကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီး သိမ်းဆည်းသောပုံစံ ကွဲပြားခြားနားမှုများ ရှိနိုင်ပါသည်။ ထို့အတွက် ဆေးဘူးအခွံ၌ပါသော သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှု ညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခြင်း သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူအား မေးမြန်းခြင်းကို အမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရစေရန်အတွက် ဆေးဝါးအကုန်လုံးကို ကလေးများ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များနှင့်ဝေးရာတွင်ထားပါ။
Mentholatum deep heat rub အားအိမ်သာထဲပစ်ချခြင်း၊ ရေထွက်ပေါက်များမှ ဆေးချခြင်းမျိုးအား မလုပ်သင့်ပါ။ ဆေးဝါးများကို မလိုအပ်တော့သည့်အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားသည့် အခါများတွင် စနစ်တကျစွန့်ပစ်ရန် အရေးကြီး၏။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျ မည်ကဲ့သို့စွန့်ပစ်ရမည်ဆိုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သင့်၏ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နှင့် တိုင်ပင်နိုင်ပါသည်။
Mentholatum Deep Heat Rub (မန်သိုလာတမ် ဒဏ်ကြေလိမ်းဆေးအပူ) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
Mentholatum deep heat rub ကိုမသုံးခင် အောက်ပါတို့ရှိပါက ဆရာဝန်အား ပြောပြပါ။
mentholatum deep heat rub တွင်ပါသော active agent များ inactive agent များနှင့် ဓါတ်မတည့်မှုရှိလျှင်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Mentholatum Deep Heat Rub (မန်သိုလာတမ် ဒဏ်ကြေလိမ်းဆေးအပူ) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
ယခုဆေးဝါးကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန်နှင့် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်တွင် အသုံးပြုလျှင် ဆိုးကျိုးများရှိမရှိ ဆုံးဖြတ်နိုင်ရန်အတွက် လုံလောက်သောလေ့လာစမ်းသပ်ချက်များ မရှိပါ။ ဆေးမသောက်သုံးမီတွင် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောကောင်းကျိုးများနှင့် ဆိုးကျိုးများအားလုံးကို ချိန်ဆနိုင်ရန်အတွက် သင့်ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ပါ။
Mentholatum Deep Heat Rub (မန်သိုလာတမ် ဒဏ်ကြေလိမ်းဆေးအပူ) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
တခြားဆေးများကဲ့သို့ပင် mentholatum deep heat rub ကိုသုံးခြင်က တစ်ချို့သော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။ အများစုမှာ ဖြစ်လေ့မရှိသလို ဖြစ်လာလျှင်လည်း ကုသရန်မလိုတတ်ပါ။ သို့သော ဆေးကိုသုံးနေရင်း ပြဿနာတစ်ခုခုဖြစ်လာပါက ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ရမည်မှာ အရေးကြီးပါသည်။
လိမ်းသည့်နေရာတွင် နီခြင်း၊ ပူခြင်း၊ စူးခြင်း၊ လောင်နေသလိုဖြစ်ခြင်းများ ခံစားရနိုင်သည်။
ယားခြင်း၊ ရောင်ခြင်း (အထူးသဖြင့် မျက်နှာ၊ လျှာ၊ လည်ချောင်း)
အရည်ကြည်ဖုထခြင်း၊ ရောင်ခြင်းများ လိမ်းသည့်နေရာတွင်ဖြစ်နိုင်သည်။
လိမ်းသည့်နေရာ၌ ပုံမှန်မဟုတ်ပဲ ပိုနာလာခြင်း
ဘယ်ဆေးတွေက Mentholatum Deep Heat Rub (မန်သိုလာတမ် ဒဏ်ကြေလိမ်းဆေးအပူ) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Mentholatum deep heat rub သည် သင်အခုသောက်သုံးနေသည့် တခြားသောဆေးဝါးများနှင့် ဓါတ်ပြုမှုများဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးအာနိသင်ပြောင်းခြင်းနှင့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်လာနိုင်သော ပြောင်းလဲမှုများဖြစ်နိုင်ပါသည်။ မလိုလားအပ်သောဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုများ မဖြစ်လာစေရန် သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေသော ဆေးဝါးများအားလုံးကိုစာရင်းပြုစုထားပြီး (စာရင်းလုပ်သည့်အခါ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားသည်များ၊ မညွှန်ကြားဘဲသောက်သုံးနေသည်များ၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းများ အားလုံးပါရပါမည်။) ဆရာဝန် သို့မဟုတ်ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူအား အမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးများကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါပဲ သောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏပြောင်းလဲခြင်းများ မပြုလုပ်ပါနှင့်။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Mentholatum Deep Heat Rub (မန်သိုလာတမ် ဒဏ်ကြေလိမ်းဆေးအပူ) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Mentholatum deep heat rub က အစားအသောက် သို့မဟုတ် အရက်သေစာနှင့် ဓါတ်ပြုမှုများဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနှင့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်လာနိုင်သောပြောင်းလဲမှုများ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ မလိုလားအပ်သည့် ဓါတ်ပြုမှုများမဖြစ်လာစေရန် အစားအသောက်၊ အရက်သေစာများနှင့် ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကို မေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Mentholatum Deep Heat Rub (မန်သိုလာတမ် ဒဏ်ကြေလိမ်းဆေးအပူ) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Mentholatum deep heat rub သည် သင်၏ နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနှင့် သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုများရှိနိုင်ပါသည်။ သင်၏ ကျန်းမာရေးအခြေအနေအားပိုဆိုးသွားစေခြင်း သို့မဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံ ပြောင်းလဲသွားခြင်းများ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် သင်၏ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကို သင့်ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကို အသိပေးရန်အရေးကြီးပါသည်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Mentholatum Deep Heat Rub (မန်သိုလာတမ် ဒဏ်ကြေလိမ်းဆေးအပူ) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
mentholatum deep heat rub ကို ဖြစ်သည့်နေရာတွင် ပါးပါးလေးလိမ်းပေးရမည်။ တစ်ရက်လျှင် ၂-၃ ကြိမ်လိမ်းနိုင်ပြီး ဆေးလိမ်းပြီးပါက ချက်ချင်းလက်ဆေးရပါမည်။
ကလေးတွေအတွက် Mentholatum Deep Heat Rub (မန်သိုလာတမ် ဒဏ်ကြေလိမ်းဆေးအပူ) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
အသက် ၅ နှစ်အထက် ကလေးများတွင် mentholatum deep heat rub ကို ဖြစ်သည့်နေရာတွင် ပါးပါးလေးလိမ်းပေးရမည်။ တစ်ရက်လျှင် ၂-၃ ကြိမ်လိမ်းနိုင်ပြီး ဆေးလိမ်းပြီးပါက ချက်ချင်းလက်ဆေးရပါမည်။
Mentholatum Deep Heat Rub (မန်သိုလာတမ် ဒဏ်ကြေလိမ်းဆေးအပူ) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
Mentholatum deep heat rub ကိုအောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါသည်။
Mentholatum deep heat rub တွင် L-Menthol; Methyl Salicylate; Pine Oil ပါသည်။
Mentholatum deep heat rub ကိုသုံးစွဲဖို့ လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရသည့်အချိန်တွင် အမြန်ဆုံးသုံးပါ။ သို့သော်လည်း နောက်တစ်ကြိမ်သုံးရမည့်အချိန်နှင့် နီးကပ်နေပြီဆိုပါက လွတ်သွားသောအကြိမ်ကိုကျော်ပြီး ပုံမှန်အချိန်၌ပင်သုံးလိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏအား နှစ်ဆတိုးတာမျိုး မလုပ်ပါနှင့်။